Musharax madaxweyne Daahir Geelle oo dhaliilay ka gaabinta dowladda dacwada badda | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Musharax madaxweyne Daahir Geelle oo dhaliilay ka gaabinta dowladda dacwada badda
Musharax madaxweyne Daahir Geelle oo dhaliilay ka gaabinta dowladda dacwada badda
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ahna musharax Madaxweyne 2021 Daahir Maxamuud Geele, ayaa si kulul uga hadlay Dacwadda Muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya ee Saddexda jeer Maxkamadda ICJ ay dib u dhigtay qaadista kiiskaas.
Qoraal dheer oo uu soo saaray ayuu ku caddeeyey in dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u qaaday arrimaha la xiriira dacwadda baddeenna ay Kenya nagu haysato.
Musharax Geelle ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo ay Shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan in uu u caddeeyo xaqiiqda qaddiyadda badda maadaama Saddexda jeer la tixgeliyay Codsiga Kenya ee dib u dhigista dhageysiga Kiiska Badda.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Daahir Geelle:-
“Dowladdu waxay sheegeysay in ay diiddan tahay dib u dhigistaas dacwada badda, mase jirin wax caddeynaya in ay diiddan tahay.”—— Dahir Maxamuud Geelle
Taas baddelkeeda waxaa loo nuglaaday Kenya oo mar walba rabitaankeeda la tixgelinayay.
Daah furnaanta arrintani aad ayay u yarayd walina u yar tahay waxaana ku gedaaman shaki iyo mugdi badan.
Mudane Madaxweyne, Dadka Soomaaliyeed waxay kaa filayaan dhiirranaan iyo daahfurnaan intaan ka badan iyo in aad u caddeyso xaqiiqda qaddiyadda badda.